Jubbaland oo shardi ku xirtay ka qeyb-galka doorashooyinka Soomaaliya. - Awdinle Online
Jubbaland oo shardi ku xirtay ka qeyb-galka doorashooyinka Soomaaliya.
Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa m,arkale ku celiyay in aysan qeyb ka noqoneyn doorashooyinka Soomaaliya ilaa gacanta maamulka dib loogu soo celiyo Maamulida Gobolka Gedo oo ay gacanta ku hayaan Ciidamo ay geysay dowladda Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta ee Dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ka qeyb-galay Barnaamij dood ah oo ka baxayay BBC-da waxaa uu sheegay in degaannada jubbaland lagu qabaneyn doorashada Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa uu arrntaasi u sababeeyay in Gobolka Gedo oo kamid ah degaannada Jubbaland uu weli ka maqan yahay Gacanta Maamulka Jubbaland, isla markaana ilaa lagu soo wareejiyo aysan qeyb ka noqon doonin doorashada Soomaaliya.
“ Heshiiskii 17-kii September waxaa qeyb ka ahaa in annagu mas’uul ka nahay doorashada qeybta ka dhaceysa Jubaland, marka waxaan kuu sheegayaa in Madaxweynaheena uusan qeyb ka noqon Karin meel uu qabsaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo, wuuna noo tanaasuli waayay oo xataa wuxuu naga diiday in Garbahaareey nagu soo wareejiyo oo aan geeyno 100 Wiil iyo Maamul Cuusb ayuu yiri” Wasiirka Warfaafinta Jubbaland.
Ugu dambeyn Wasiirka Warfaafinta ee Dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa ugu baaqay Madaxda dowladda ee muddo xileedkooda uu dhamaday in muddo laba Bilood Gudahood ah ay Ciidamada uga soo saaraan Gobolka Gedo si wax walba xal looga gaaro.
Caqabada koobaad ee heysta doorashooyinka Soomaaliya ayaa xilligaan waxaa ay tahay arrinta Gobolka Gedo, waxana dhowr shir oo la qabtay la isku fahmi waayay Arrinta Gobolka Gedo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanad ka hor waxaa ay degmooyinka Gobolka Gedo geysay Ciidamo farabadan, waxaana tiro lab jeer ay Ciidamada dowladda kuwa Jubbaland kula dagaalameen degmada Beled-Xaawo ee Gobolkaasi Gedo.
Previous articleMaxaa looga hadlay Kulanka Golaha Wasiirada Soomaaliya?
Next articlePuntland iyo Galmuudg oo Go’aano culus soo saaray